Oxford, Mississippi Travel Guide ho an'ny olon-tiana
Niorina tany Mississippi Avaratra, iray antsasak'adiny avy amin'ny seranan-tsambo akaiky indrindra sy ny ora iray avy amin'ny seranam-piaramanidina akaiky indrindra, dia ny Oxford, angamba ny tanàna kely indrindra any Etazonia. Ny tranon'ny Anjerimanontolon'i Mississippi ("Ole Miss"), izay nampiditra ny fiarahamonim-pahaleovantenan'ny tanàna hatry ny talohan'ny ady sivily, Oxford dia meksikana ho an'ireo tia boky amin'ny lozisialy rehetra, avy amin'ny mpankafy ny fanehoan-kevitry ny Gothique William Faulkner ho an'ny John Grisham .
William Faulkner, izay efa nitazona (ary naharikoriko) ny asan'ny postmaster tao amin'ny Oniversiten'i Mississippi, dia azo antoka fa mponina taloha indrindra any Oxford, ary hahita referans momba ilay lehilahy sy ny asany nanerana ny tanàna. Mankao ny tolakandro hitsidika ny tranony ao Oxford, izay tsara tarehy raha mihodina ny Rowan Oak ( jereo ny sary ), izay mipetraka eo amin'ny Old Taylor Road tandrifin'ny tendrony atsinanana ao amin'ny campus Ole Miss. Nanoratra ny ankamaroan'ireo asa tsara indrindra nataony izy, ka tao anatin'izany i Absaloma, Absaloma no nandriako . , Light in August , ary Fable . Ho hitanao ny latabatra tsotra nosoratany, ary koa ny karazan-tsakafo samihafa sy samihafa, izay tiany indrindra dia ny mofomamy kely Julep mena. Rowan Oak dia misokatra ny Talata ka hatramin'ny alahady mandritra ny ora maromaro miaraka amin'ny ora fahavaratra. Ny fandehanana mitsidika dia azo alamina amin'ny fanendrena fotsiny.
Raha any amin'ny làlan'i Faulkner ianao, dia azonao atao koa ny mitsidika ny fasany, izay ho hitanao any St.
Ny fasan'i Petera, fantatra ihany koa amin'ny fasan'ny Old Oxford, any amin'ny zoron'ny efitrano Jefferson Avenue sy ny avaratra faha-16. Ny fomban-drazana dia milaza fa mamela pintana whisky ianao any am-pasana, indrindra raha mpanoratra ianao no mikaroka ilay mozika.
Campus Ole Miss
Tsy afaka mitsidika an'i Oxford ianao raha tsy mitsidika ny toeram-pitsangatsanganana Ole Miss, ary azo antoka fa tsara tarehy ho an'ny mandeha tsiroaroa.
Eo am-panaovana azy anefa ianao, dia miandrasa mijanona ao amin'ny iray amin'ireo tranombakoka tsara tarehy sy fanangonana izay misokatra ho an'ny besinimaro. Ny Museum University dia samihafa karazana tranombakoka kely, ary manome fampisehoana ny zavakanto, ny fahagola, ny fitaovana siantifika, ny ephemera literatiora ary ny karazana fampisehoana isan-karazany. Tadiavo izany eo amin'ny zoron'ny University Avenue sy ny 5 Street. Ny tranombakoka dia misokatra ny Talata ka hatramin'ny Asabotsy mandritra ny ora voafetra ary mihidy mandritra ny fialan-tsasatra isan-kerinandro. Ny fidirana ankapobeny dia maimaim-poana, na dia mety hisy saram-pidirana aza ho an'ny fampisehoana an-dalambe sasany. Ny Mozea sy ny Rowan Oak dia mifamatotra amin'ny alàlan'ny làlana iray, mba hahafahan'izy ireo manaloka mora foana ny tolakandro.
Ao amin'ny Ole Miss Campus ihany koa ny blues Archive, napetraka ao amin'ny JD Williams Library, izay misimisy kokoa ho an'ny mpikaroka fa tsy mpizaha tany, fa raha mpankafy an'io poetika io ianao, dia mety ho mendrika ny hijanona ihany. Io no singa lehibe indrindra amin'ny blues, firaketana, boky ary ephemera eto amin'izao tontolo izao. Miantso (662) 915-7753 hanao fanendrena.
Ny fiatoana ankapobeny dia ny Archives Archives and Manuscripts Collection, izay ahitana ny taratasy nosoratan'i Faulkner sy ephemera (ary koa ny loka Nobel) ary ny andiam-pifidianana hafa koa.
Ny fampisehoana rotaka dia mipoitra, matetika mifantoka amin'ny lohahevitra ara-literatiora na tantara manan-tantara miisa Mississippi, ary azo jerena ao amin'ny etona fahatelo. Ny tranokala JD Williams dia hita ao amin'ny 1 Library Loop, eo afovoan 'ny toeram-pianarana. Ny ora maro dia miovaova mandritra ny taona.
Alohan'ny handaozanao ny toeram-pianarana, azonao atao ny mijanona ao amin'ny Foiben'ny fianarana ny Kolontsaina Tatsimo, izay ahitana ny Southern Foodways Alliance, Living Blues Magazine, ary tetikasa manokana maro, anisan'izany ny fihaonamben'ny Etiopiana lehibe toy ny Mozika Atsimo Fihaonambe, Konferansa ho an'ny boky, ary ny Faulkner sy Yoknapatawpha Konferansa.
Izy ireo koa dia tafiditra ao amin'ny Gammill Gallery, misokatra ho an'ny daholobe alatsinainy hatramin'ny zoma mandritra ny ora fiasana, afa-tsy amin'ny fialantsasatry ny oniversite. Ny Gammill Gallery dia manasongadina ny sarimihetsika fanadihadiana momba ny Amerika atsimo, ary na dia vaky vetivety aza izy io, dia iray manokana, izay tsara voatsabo sy mendrika ny fotoana.
Jereo koa ny kalandrie alohan'ny fitsidihanao, koa, satria misy famelabelarana matetika, famakiana, fampisehoana an-kira, ary fampisehoana iray hafa izay maimaim-poana na mora vidy ary misokatra ho an'ny besinimaro.
Ny fanasongadinana ny fizahantany literatiora any Oxford dia hita any amin'ny faritry ny kianja Courthouse Square: Square Square ( jereo ny sary ). Ity fivarotana kely ity, izay nahazo laza tamin'ny zony manokana, dia ny zavatra rehetra azonao tadiavina any amin'ny fivarotam-boky tsy miankina - tontolo iainana miavaka, tambajotra mahavariana tsara, ary boky maro manintona. Misy fiantraikany goavana amin'ny mpanoratra atsimo, izay matetika mamaky boky sy famakiana boky. Manontany momba ny kopia nosoniavina, satria misy matetika ny tahiry. (Nalaiko sary telo nosoratan'i Charles Frazier nandritra ny fitsidihako farany.)
Ny Boky Square dia tranokely vita amin'ny Kitaposin'ny Kitapo, varavarana vitsivitsy monja eo amin'ny Kianja, izay manolotra boky sy boky efa misy boky (miverina), ary mamaky ny ankamaroan'ny famakiana, ny tantaran'ny tantaran'ny ankizy sy ny hetsika hafa. Ny fampielezam-peo amin'ny onjam-peo isan-kerinandro antsoina hoe Thacker Mountain Radio dia tahaka ny tsy fisian'ny Prairie Home Companion, na angamba Grand Ole Opry avo lenta. Ireo mpanoratra sy poety dia mamaky sombin-tsoratra avy amin'ireo asa vao haingana, ary mozika tatsimo hafa - avy amin'ny blues ho any amin'ny firenen-kafa mankany bluegrass ho an'i Cajun - dia manome feo mivantana. Raha aseho amin'ny endrika fampisehoana ny mpanakanto malaza iray na mpanoratra, dia indraindray izy dia soratana fotsiny eny amin'ny arabe ao amin'ny Lyric Theatre, lehibe kokoa noho izany, mitadiava famantarana na mijery ny tranonkala alohan'ny fotoana. Tapahina ny alakamisy alina amin'ny 6 hariva
Raha any Oxford ianao dia mila mihinana sy matory, azo inoana. Ireto misy hevitra vitsivitsy.
Toeram-pisakafoanana: Ho an'ny sakafom-pisakafoanana iray, miezaha hitsidika ny City Grocery, iray amin'ireo trano fisakafoanana efatra ao an-toerana miaraka amin'ny filoha James Beard, Chef Chef John Currence. Mandritra ny sakafo maraina, jereo ny fiaraha-miombon'antoka Big Miarahaba azy - ireo mpankafy atsimo dia hibanjina ireo tantara rehetra momba ny tantara amin'ny anaran'ny sakafo. Ho an'ny zavatra tsy dia mahazatra kokoa, aleo ho any Proud Larry's ho an'ny mozika mivantana, labiera, ary pizzas tsy misy pila, na Ajax Diner ho sakafo mahazatra atsimo mahomby. Ho an'ny fanandramana marina an'i Mississippi, ireo mponina ao an-toerana dia handefa anao 15 kilaometatra ivelan'ny tanàna mankany Taylor Grocery, antokon'olom-borona tranainy iray. Nirehareha be i Oxford tao amin'ny sehatry ny trano fisakafoanana any an-toerana (tsarovy fa monina eto ny Southern Foodways Alliance), noho izany dia samy mankasitraka sy mitsambikina ny trano fisakafoanana.
Fialan-tsasatra : Misy seranana sy hotely maoderina maoderina (Days Inn, Hampton Inn, Holiday Inn Express, Super 8, sns.), Saingy tsy dia lavitra loatra ny tanàna. Mba hijanonana lavitra kokoa, andramo ny Downtown Oxford Inn sy Suites na ny Inn ao Ole Miss, izay samy madio sy azo antoka ary azo vidiana. Mba hahazoana tsiron-tsakafo ao an-tanàna anefa, dia manandrama iray amin'ireo Bed and Breakfasts maro karazana sy maoderina. Puddin 'Place ary ny Roambinifolo 5, izay tompon'antoka sy mpihira avy amin'ny mpilalao gitara teo aloha ho an'ny rock / jam band Widespread Panic dia samy soa ho azy ireo ao anatin'ny efitry ny kianja sy ny oniversite.
Sarin'ny Oxford, Mississippi
Natchez, Mississippi - Mileage sy Estimated Driving Times
5 Toeram-piantsonan'ny Mississippi RV mila mitsidika
Fivarotana any Downtown Pittsburgh: Ny Tari-dalana feno
Ny Kitapo Mivembena any amin'ny Tendrombohitra Forest
Toeram-pisakafoanana ao Montreal's Old Port Bonsecours Basin: 2017-2018 Season (Natrel Rink)
Ny lalana mankany Veloway any Austin
Nosy Grika miaraka amoron-dranomasina ngeza
Torolalana ho an'i Lille any avaratr'i Frantsa
Aiza no hividianana Lederhosen any Munich
Antoni Gaudi's Sagrada Familia any Barcelone
Toro-hevitra tena ilaina ho an'ny Telozoro Volamena any Inde
Fampahalalana fototra ho an'ny mpitsidika voalohany tany Philippines
Mega Millions, Powerball, ary bebe kokoa any Virginia
5 Louisiana RV Parks mila mitsidika